Accueil > Gazetin'ny nosy > Fampianarana teknika : Manao amboletra ny minisitra
Nisavoritaka ny tao amin’ny ministeran’ny fampianarana teknika sy ny fampiofanana arak’asa eny Ampefiloha, omaly. Mamohehatra ny zava-nitranga tao satria dia novakiana ny biraon’ny Service de la gestion des carrières, ary noesorina an-keriny tamin’ny toerany ny lehiben’io sampandraharaha io. Miharihary toy ny vay an-kandrina ny tsy fanarahan-dalàna amin’ity raharaha ity satria raha ny fantatra dia nisy ny fanitsakitsahana ny lalàna manankery eto amin’ny firenena amin’ny fomba fanendrena tompon’andraiki-panjakana ambony.
Tsiahivina fa isan’ireo departemanta niova mpitantana tamin’ny fanovana governemanta farany teo ny ministeran’ny fampianarana teknika sy ny fampiofanana arak’asa. Na mbola tsy voatendry aza ireo mpiara-miasa akaiky (Staff) ny minisitra vaovao Vavitsara Gabriella Rahantanirina, dia noesorina tamin’ny toerany avy hatrany ny lehiben’ny Service de la gestion des carriers ary notendrena ny olona vaovao hisolo azy, dia i Saydo Ratompoarimanana. Raha ny fantatra anefa dia tsy ara-dalàna mihintsy ny fametrahana an’io olona io ao amin’ny ministeran’ny fampiofanana teknika sy arak’asa satria tsy mbola namoaka ny “arrêté de la mise à disposition pour l’emploie” ny departemanta niasan’i Saydo Ratompoarimanana teo aloha, dia ny minisiteran’ny fanabeazam-pirenena. Ny lalàna anefa dia milaza fa tsy maintsy hamoahana an’io didim-pitondrana io ny mpiasam-panjakana ambony amina ministera iray raha hapetraka amin’ny departemanta ministerialy hafa.
Araka ny loharanom-baovao mari-pototra anefa dia fantatra fa efa voasaringotra tamina raharaha maloto na fanodikodinana “poste budgétaire” miisa 300 teo anivon’ny ministeran’ny fanabeazam-pirenena i Saydo Ratompoarimanana, tamin’ny taon-dasa. Tsy miraharaha izany anefa ny minisitra Vavitsara Gabriella Rahanta-
nirina fa manao amboletra mametraka an’io namany akaiky io.